therapy cunto Chinese - Hospital Shijiazhuang Yiling
therapy cuntada Shiinaha (sidoo kale loo yaqaan daaweynta nafaqo iyo therapy cuntada) waa hab ka mid ah u labisnaayeen oo salka ku Chinese aaminsan yahay ku saabsan saamaynta cuntada on shaqeeyo aadanaha, iyo xuddun u ah oo ku saabsan fikradaha sida cunidda si dhexdhexaad ah. Its amarradaada aasaasiga ah waa isku dhafka ah ee views dad iyo fikradaha ka daawo-dhaqameed Chinese barbaro.
therapy Cuntada muddo dheer hab caadi ah in caafimaadka dadka dhexdooda.
Cuntada sida qaybta ugu muhiimsan nolosha, ilaa xad badan, saameeyaa caafimaadka. Waayo, dadka qaba cudurka, cunto ka muhiimsan. Waayo, bukaan, maalin kasta cuntada ay ujeedadoodu tahay in lagu hagaajiyo kabashada jirka, halka hagaajinta jidhka, in jidhka la soo celin karin dowlad yara caafimaad sida ugu dhakhsaha badan, si loo gaaro si fiican saamayn daaweyn.
therapy cuntada Shiinaha ayaa saameyn weyn ku kansarka daaweynta, scleroderma, atrophy muruqa ah, laabotooyinka, cudurada neuron motor, fibromyalgi, diabetes, nephropathy, iyo noocyada kale ee cudurrada iyo xaaladaha daran.